Dhegayso music on Spotify Linux mar kasta oo aad rabto in aad
Helitaanka nidaamyada hawlgalka kala duwan ayaa ka dhigay kooxda Spotify ah si ay u horumariyaan app ah oo loogu talogalay qof walba oo ka mid ah hababka qalliinka. Spotify ayaa app for Windows, Mac, Android, macruufka iyo dabcan Linux.
Linux waa nidaamka qalliinka ah in ay awood u codsiyada computer iyo user ay u noqon qabtaa shaqooyin doonayo awoodaan. Waa arrin aad u la mid ah nidaamyada hawlgalka kale sida Windows iyo OS Mac iyo sida hababka kale ee ka hawlgala, Linux ka hawlgala nidaamyada waxaa laga heli karaa kombiyuutarada desktop iyo laptops sidoo.
Hadda, waxaynu og nahay in dad kala duwan doonayaan waxyaabo kala duwan iyo kooxda Spotify horumariyo barnaamijyadooda shaqsi si loo waafajiyo users iyo taageero dhammaan hababka qalliinka. App Spotify ee Linux wadaagaan sifooyinka la mid ah la codsiyada desktop Windows iyo OS Mac. Users hore u yaqaanaan Spotify for Windows ama Mac OS ma u baahan tahay si ay u bartaan sida loo isticmaalo Spotify u Linux sababta oo ah tallaabooyinka iyo nidaamka yihiin ku dhowaad isku mid ah.
Macmiilka Qaybta 1.Install Spotify ee Linux isticmaalaya terminal line amarkii
Qaybta 2.How si loo soo dajiyo Spotify aan terminal line amarkii
Qaybta 3.How in uninstall ee Linux
Qaybta 4. Download music free la TunesGo
Users Linux sidoo kale doonayaan inay ku raaxaystaan ​​music halka ka shaqeeya ay computer sida dadka kale. Iyadoo Spotify laga heli karaa Linux, waxay sidoo kale ka heli kartaa ugu badan uga music app Spotify ah. Haddii aad leedahay nidaamka ka hawlgala Linux iyo rabto in aad rakibto Spotify on your computer, raac tallaabada fudud by tilmaamaha tallaabo hoos ku qoran.
Hadda, waxaa jira labo siyaabood oo loo soo dajiyo Spotify ku saabsan habka ka hawlgala Linux. Waxaa lagu rakibi karo iyada oo terminal iyo waxa ay sidoo kale lagu rakibi karo iyada oo xarunta software ah.
Qaybta 1. Ku rakib macmiilka Spotify ee Linux isticmaalaya terminal line amarkii
Fur line terminal amarka adigoo riixaya Ctrl + Alt + T ama baadhaan ka dumisaan by Meta / Super / Windows button iyo terminal nooca adiga oo riixaya.
Furaha bakhaar hadda ku daray.
Nidaamka hadda updated.
Hadda, waxaa lagu weydiin doonaa haddii aad rabto in ay sii wadaan. Press Y on your keyboard iyo weeraray galaan in ay sii wadaan. Hadda, sug ilaa download iyo rakibaadda la dhamaystiro.
Waxaad hadda si guul ah ku rakiban Spotify music app on your computer Linux isticmaalaya terminal line amarka. Si aad u hubiso, ordo app Spotify ah; si fudud u raadiso Spotify iyo waxaad arki doontaa in la heli karo on your computer Linux.
Qaybta 2. Sida loo soo dajiyo Spotify aan terminal line amarkii
Linux saamaxaya kuwa isticmaala in ay awoodaan in ay sameeyaan waxa ay doonayaan in ay sameeyaan mid ka mid dhex terminal line amarka ama iyada oo User Interface ee Garaafka (gui). Wixii kuwa aan geeky ama kuwa aan aqoon u leh Linux amray in line terminal amarka isticmaali kartaa User Interface Garaafka (gui) si ay sameeyaan waxa ay doonayaan in ay sameeyaan oo loo gaaro natiijo la mid ah sida dadka isticmaala isticmaala terminal line amarka.
Ku xiridda Spotify dhex User Interface ee Garaafka (gui) waa sahlan, sababtoo ah dadka isticmaala ma u leeyihiin in ay la ciyaaraan codes ee terminal line amarka. Si aad u rakibto Spotify isticmaalaya User Interface ee Garaafka (gui) si fudud raac tallaabooyinka hoos ku qoran.
Laga soo bilaabo aad screen Home, furto siiyaa biraawsarkaaga (Firefox).
Fur website-ka Spotify ag maraya in ay bar cinwaanka iyo aad qortid www.spotify.com. Hadda, ku dhacay galaan iyo bogga inay ku shuban sugaan.
In website-ka Spotify, guji "Hel Spotify lacag la'aan ah". Waxaad u baahan tahay inaad leedahay xisaabta ku Spotify si ay u awoodaan in ay isticmaalaan Spotify. Haddii aanad lahayn xisaab ah ku Spotify, guji kaliya diiwaanka dhinaca gacanta midigta sare ee browser iyo naftaada aad u hesho xisaab lacag la'aan ah.
Bogga soo socda ayaa kuu sheegi doona in aysan u taageeraan nidaamka qalliinka (Linux) laakiin ha ka welwelin. Just download codsiga daaqadaha ee Spotify in download folder aad adigoo gujinaya ah "Windows" link sida hoos ku qoran.
Ka dib markii ay soo degsado Spotify for Windows, ku dhow ama loo yareeyo Firefox oo la helo rakibayo Spotify ee download files ama folder aad u soo bixi rakibayo si ay u. Xaqa guji rakibayo iyo dooro "furan loader barnaamijka daaqadaha khamri" dhibic ka hoos.
Sug Spotify in ay soo baxdo iyo rakibi. Marka la rakibo waa dhameystiran yahay, laba walxood oo cusub oo ka muuqan doontaa desktop; "Spotify.lnk" iyo "Spotify". Waxaad ka hor tegi karin iyo tirtirto "Spotify.lnk" sababtoo ah ma waxaa muhiim ah. Orod app Spotify iyo gasho in aad xisaabta si ay u bilaabaan isticmaalkiisa.
Spotify u Linux si sax ah waa isku mid la mid ah Windows iyo Mac, wuxuuna ka shaqeeyaa si la mid ah. Waxaad ka ciyaari kara music, la abuuro playlists iyo abaabulo si la mid ah waxaa la sameeyaa oo ku saabsan codsiga desktop Windows iyo Mac playlists.
Qaybta 3. Sida loo uninstall ee Linux
Uninstalling Spotify ee Linux waa mid aad u fudud oo degdeg ah. Waxaa xitaa ka fudud oo dhaqso badan bay ku uninstalling on Windows iyo OS Mac.
Waxaa jira siyaabo kala duwan si ay uninstall Spotify ee Linux. Dhammaan habkan waa si dhakhso ah oo si fiican u shaqeeyo.
Aad screen Home iyo View xusho
Dooro Show Qarsoon Files
Raadi iyo tirtirto folder .wine ah
Fur ilaa aad terminal (Ctrl + Alt + T), ku qor code-ka hoose ka dibna tirtirto folder Spotify.wine ah
"Fuliyaan shirkad -rf ~ / .wine" (oo aan ku saasbsan)
Fur ilaa aad terminal (Ctrl + Alt + T), ku qor code-ka hoose oo ka dhacay galaan
"Fuliyaan shirkad -f -R ~ / .wine / drive_c / Program Files / Spotify" (oo aan ku saasbsan)
Dalbo mid ka mid ah hababka kor ku xusan in ay gabi ahaanba tirtirto ama uninstall app Spotify ka yimid nidaamka ka hawlgala Linux.
Qeybta 4: Download Spotify music lacag la'aan ah Linux la TunesGo
POP 8 Artists Music
Ka iPad Bedelka Music inay iPad fudayd
> Resource > Music > Dhagayso Music on Spotify Linux markii aad doonto